Kioba: Resaka Momba Ny Kaonty Twitter an’i Yoani Sánchez · Global Voices teny Malagasy
Kioba: Resaka Momba Ny Kaonty Twitter an'i Yoani Sánchez
Voadika ny 20 Marsa 2012 4:44 GMT
Ny 26 Febroary 2012, lahatsoratra iray ho fanehoana fomba fijery [es] nivoaka tao amin'ny gazety iray mpivoaka isan'andro ao an-tananan'i Mexico , La Jornada, no nanondro ilay Kiobana bilaogera Yoani Sánchez ho “hosoka” noho ny haavon'ny hetsika ataony sy ny lazany ao amin'ny Twitter. Taona iray taorian'ny nanombohan'i Sánchez ny bilaoginy, Generación Y [es], mahatratra 15 tapitrisa isam-bolana no tonga mitsidika ilay tranonkala. Hatramin'io fotoana io, Sánchez dia nahazo fankasitrahana maro avy aminà fikambanana miaro ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety sy mpiaro ny zon'olombelona eran'izao tontolo izao. Ao amin'ny Twitter, Sánchez dia manana mpanjohy 226.000 (hatramin'ny 8 Martsa 2012) ary manaraka olona efa ho 80.000.
Ilay mpanoratra sy mpanao fanadihadiana, Salim Lamrani, Frantsay iray manampahaizana, matetika mandray anjara ao amin'ny The Huffington Post sy ao amin'ny fampahalalam-baovaom-panjakana Kiobana toy ny CubaDebate [es], dia milaza fa ny faneriterenta ny fahafaha-miditra amin'ny aterineto ao Kioba dia tsy tokony nahafahan'i Yoani Sánchez mikolokolo sy manana izao haavo ananany ao amin'ny Twitter izao.
Faran'izay zavatra tsy azo eritreretina izany hanaraka olona 80.000 izany, amin'ny alàlan'ny sms fotsiny na fifandraisana isan-kerinandro avy any aminà hotely iray. Zavatra tsy maintsy ilaina ny fidirana isan'andro mba hanatanterahana izany
Yoani Sánchez [nibitsika] hafatra 9.3 isan'andro. Tamin'ny 2011, ilay bilaogera dia namoaka salan'isan-kafatra 400 isam-bolana teo ho eo. Ny sandan'ny [fandefasana] hafatra iray ao Kioba dia 1 peso ‘convertible’ raha kely indrindra [1 CUC, eo amin'ny $1.40 USD], izay manome 400 CUC isam-bolana rehefa mitambatra.
Dikasarin'ny fàfana amin'ny fahana twitter an'i Yoani Sanchez.
Ny fanamafisan'i Lamrani dia nanosika ireo bilaogera sy mpampiasa Twitter handefa fisainana momba ny fomba ataon'i Sánchez hitazonana toerana matanjaka toy izany anatinà tranonkalan'ny tontolon'ny fitorahana bilaogy kiritika nefa tsy manana fahafaha-miditra matetika amin'ny aterineto. (Fanamarihana: Rehefa manasongadina ny olana atrehan'ny Kiobana amin'ny fidirana tranonkala i Lamrani, dia nabaribariny ihany koa ny sanda mihoampampan'ny fandefasana SMS na hafatra amin'ny alalan'ny finday avy ao Kioba.)
To an'i Lamrani, ilay bilaogera Josep Calvet [es] dia namintina fa Sánchez dia tsy maintsy nahazo fanampiana avy any ivelany tamin'ny kaontiny:
Mety hoe ireny olona zohian'i [Yoani Sánchez] ireny dia nanaraka azy aloha tany amboalohany, ary dia mba novaliany tamin'ny fanarahana an-dry zareo kosa avy eo. Io dia tsy maintsy [mitaky]…loharano goavana sasantsasany izay lazainy fa tsy ananany. […] [Ao amin’] ny kaontiko Twitter, raha toa aho te-hahazo mpanjohy [misimisy kokoa], ny tsotra indrindra amin'ny làlan-kizorana dia ny manaraka olona maro sy manao fitia mifamaly mandrakariva. Saingy fantatro ny sandan'izany amin'ny resaka fandavan-tena, na hatramin'ny fanànana fifandraisana mikoriana tsara. Amin'ny tranga [Sánchez], tsy maintsy misy olona maro miara-mitantana ilay kaonty. Iza izy ireo?
Nolazain'i Sánchez tsy nafeniny fa any Alemaina no ampiantranoina ny bilaoginy ary ireo namana monina any ivelany any no manodina azy. Tsy niteny velively anefa izy na nahazo fanampiana avy any ivelany ny kaontiny Twitter na tsia, saingy raha jerena amin'ny porofo tanisain'i Lamrani, dia ho mora amin'ny saina ny manakatra hoe mahazo izy. Ny sasany milaza fa manao izany ho an'ny tombontsoan'ny tenany fotsiny izy : tiany mba handona olona maro araka izay tratra ireo hafatra avy aminy, ka izany no nangatahany fanampiana avy amin'ny hafa. Resaka fomba fihevitra no mahatonga azy raisina ho “mpanao hosoka” na tsia avy amin'izany.
Nomarihan'i Lamrani ihany koa fa i Sánchez dia manana “matoatoa” mpanjohy azy, teboka iray izay hitany tamin'ny fampiasàna ny rindrambaiko fijerena antontanisa ao amin'ny Twitter, ny Followerwonk. Manodidina ny 10 isan-jato amin'ireo 226.000 manjohy an'i Sánchez no in-telo raha be indrindra no nandefa bitsika hatramin'ny naha-tao amin'ny Twitter azy ireny. Ilay tatitra koa dia mampiseho fa manana mpanjohy marobe izay tsy manaraka afa-tsy izy irery ihany i Sánchez.
Ilay Kiobana mpanoratra monina any Barcelona sy Penúltimos Días mpanoratra Ernesto Hernández Busto [es] dia nanilika ny fomba fihevitra hoe ireny lazaina fa “matoatoa” mpanjohy azy ireny dia afaka hanaporofoana fa hosoka i Sánchez:
Salim Lamrani – sy ireo Kiobana rehetra mpanao fampielezan-kevitra ety anaty aterineto – tohina mafy tamin'ny mpanjohy 1% an'i Yoani Sánchez ao amin'ny Twitter izay tsy manana mpanjohy ho azy akory. Ny vendrana mikasika ny fomba fiasan'ny tambajotra sosialy ihany no hilaza an'izany ho zava-baovao. Any amin'ireo kaonty Twitter malaza rehetra manerana izao tontolo izao dia misy ny teny tsara lahatra famitapitahana, ny robots ary ny mpanjohy izay tsy manana ny mpanjohy azy manokana akory.
Ny lahatsoratr'i Lamrani dia tsy manaiky fa ireo mpampiasa Twitter manana ny lanjany dia mety haharay hafatra tsy niriana ‘spams’ betsaka sy hifanehatra aminà ‘robots’ maro raha miohatra amin'ireo zara raha manana mpanjohy an-jatony vitsy na an'arivony vitsy. Ryan Singel, tonian-dahatsoratry ny Wired Magazine, dia nanazava ny antsoina hoe Twitter “bot” phenomenon taorian'ny tafatafa natao tamin'i Del Harvey, talen'ny fiarovana sy fanomezan'antoka ao amin'ny Twitter
Ireo olona ao an-damosin'ny [bots] dia manantena hisarika ny fitiavan-tenanao. Raha toa ianao ka irony olona izay toa mandeha ho azy amin'ny fanjohiana izay nanjohy anao irony, dia efa nanasa ny hafatra tsy irina ‘spams’ ho ao aminao ianao mandra-pialànao tsy hanaraka azy na hibahana ireo kaonty manorisory.
Ny tranonkala iray izay mivarotra rindrambaiko ‘bot’ ho an'ny Twitter dia mampanantena fa hahazo mpanjohy 1.500 hatramin'ny 3.500 isan-kerinandro. Ilay rindrambaiko dia manome fahafahana ireo mpandefa ‘spams’ mba hitantana kaonty maromaro, hanafina ny adiresy IP amin'ny alalan'ny “proxies”, ary hitady mpanjohy amin'ny arakaraky ny toerana sy ny faritr'ora tiana hokendrena.
Tsara ny anamarihana fa ny hetsik'i Sánchez ao anaty Twitter dia tsy manome afa-tsy ny iray amin'ireo porofo marobe amin'izay mampalaza azy any Amerika Latina sy manerana izao tontolo izao. Sarotra ny hahafantatra hoe olona toy inona sy vondrona manao ahoana no afaka hanampy azy hitazonany ny toerany tsy mitsaha-misonga ao amin'ny aterineto. Raha tsy hijerena ireo filazàna avy amin'ny lafy samihafan'ny adihevitra, dia mazava fa mitohy hatrany mandona sy mitondra ny akony amin'ireo mpampiasa Twitter an-tapitrisa manerana izao tontolo izao ireo hafatra avy amin'i Sánchez, ary ity farany dia fitaovana iray matanjaka manosika azy amin'ny tolony.